I-Semalt: Ungavimbela kanjani ama-pop-ups, Engeza okungafani, Nokuxazulula izinkinga ku-Mozilla Firefox
Esihlokweni esilandelayo, uMx Bell, Semalt uMenenja Wokuphumelela Kwamakhasimende, uchaza zonke izilungiselelo ozidingayo mayelana nokulawulwa kwezimpikiswano kumsakazo wakho we-Mozilla Firefox.
Ama-Pop-ups amawindi esiphequluli avela ngokuzenzakalelayo kusiphequluli sakho ngaphandle kwemvume yakho. Abaze bagcwalise sonke isibuko futhi bangabonisa phezulu kwekhasi lamanje noma ngaphansi kwalo (ama-pop-unders). I-Firefox inesici esiyingqayizivele evumela ukuthi abasebenzisi bayo bakwazi ukulawula kokubili ama-pop-ups nama-pop-unders. Uma uvakashela ikhasi lokukhethwa kukho, uzothola ukuthi isici sokuvimba ukuvaliwe sivuliwe ngokuzenzakalelayo. Uma umsebenzisi engakaxoshanga ngaphambilini ibha yolwazi lwe-Firefox, izovela nganoma yisiphi isikhathi isiphequluli sivimbela i-pop-up. Isithonjana esibonisa i-pop-up evinjelwe sizobonisa futhi kubha yamanje yekheli.
Ukuze ufinyelele izinketho zokuvimbela pop-up kusayithi, chofoza Izinketho kusuka bar info noma isithonjana ibha yekheli. Ungakhetha kusuka kokulandelayo:
Vumela noma Vimbela ama-pop-up kusayithi lamanje;
Hlela okukhethwa kukho kwe-Blocker ngokuzenzakalelayo;
Khetha ukungakubonisi umlayezo okwazisa mayelana nokuvinjwa okuvaliwe;
Bonisa imininingwane mayelana nokuvinjwa kwe-pop-up;
Ukuvimbela ama-pop-up kusayithi kungaphazamisa amanye amawebhusayithi. Amanye amawebhusayithi asebenzisa ama-pop-up ezinye zezici zawo ezibalulekile. Uma uvimbela ama-pop-ups, ikhubaza lezi zici. Ukuvumela amanye amasayithi ukuba asebenze uma upheqa, uzodinga ukungeza amawebhusayithi athile uhlu lwabo abavunyelwe ukubonisa ama-pop-ups.
Ukuvimbela ama-pop-ups akusebenzi ngaso sonke isikhathi..Amanye amawebhusayithi azi ukuthi angasebenzisa kanjani izindlela ezingakaziwe, okwenza kube nzima ku-Firefox ukuvimbela ukuvela kwabo okungaveli ngisho nangemva kokuvimbela.
Nansi okumele ulindelwe kuzilungiselelo ze-block-up blocker:
1. Ukufinyelela kuzilungiselelo ze-pop-up blocker
Chofoza inkinobho yemenyu ekhoneni eliphezulu ngakwesokudla bese ukhetha Izinketho kumenyu yokudonsa;
Thepha ku-Iphaneli Yobumfihlo Nezokuphepha;
Ungahloli amawindi we-Block pop-up ngaphansi kwesigaba seMvume;
Ngaphansi kwethebhu engaphandle, iwindi lezingxoxo elisha livela lapho ufaka uhlu lwamasayithi ofuna ukuwavumela;
Ingxoxo ikukhuthaza ukuba:
Vumela: kukusiza ukuba ungeze iwebhusayithi kuweluhlu oluhlukile;
Susa isayithi: ikuvumela ukuthi ususe iwebhusayithi kusuka kuhlu oluhlukile;
Susa wonke amaSayithi: ususe wonke amawebhusayithi ohlwini lwangaphandle;
2. Kwenzekani uma i-pop-up ingavinjelwe?
Okokuqala, hlola ukuthi i-pop-up ivela ku-Firefox. Ukubukeka kufanele kukutshele ukuthi ngabe i-pop-up ivela kusiphequluli se-Firefox. Uma efasiteleni lokuphambuka kukhona isithombe esinombukiso ovezwe kumbuthano, khona-ke i-pop-up ivela ku-Firefox. Ukungabikho kwayo kusho ukuthi kungenzeka ube yisisulu se-malware kukhompyutheni yakho engumthombo wabantu bakho.
Okwesibili, hlola ukuthi isayithi lengezwe yini ohlwini olungabanjwanga. Landela inqubo yokufinyelela izilungiselelo zokuvinjelwa kwe-pop-up uphinde uvule ibhokisi lezinkhulumomphendvulwano ezingaphandle. Uma ngabe i-website ebangela ukuphakanyiswa kwewebhu kuluhlu oluhlukile, chofoza ku-Susa isayithi, bese ulondoloza bese uvala ikhasi.
Ngezinye izikhathi amawindi ama-pop-up ahamba ngokuzimisela nge-Firefox ukuqinisekisa ukuthi awuvimbeli ama-pop-up amasayithi adinga ukuthi asebenze. Ngakho-ke, thola ukuthi ifasitela ibonisa ngemuva kokuchofoza igundane noma ucindezela ukhiye. Uma benza, futhi isici sokuvimbela ukuvaliwe sivuliwe, akudingeki ukhathazeke.
Uma amawindi e-pop-up aklanyelwe ukubukeka njengamawindi kodwa angenjalo, ke i-Firefox ayikwazi ukuwayeka.
Okokugcina, uma i-pop-up ivela ngemuva kokuvula i-Mozilla ikucela ukuba uhlanganyele ocwaningweni oluvela ku-SurveyGizmo, kuyinkqubo ye-vetted yenkampani futhi i-Firefox ngeke iyivimbele.